Osimiri Naịl | Akụkọ Njem
Otu n'ime osimiri ndị a kasị mara amara n'ụwa bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya Osimiri Naịl. Ekwula m na o nweghi oke ocha nke ihe omimi, anwansi, nke akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ gbara gburugburu, gbara agba gburugburu. Nke a bụ osimiri Naịl, bụ osimiri naanị aha ya na-akpali ịmata ihe.
O nwere ike ịbụ na o nwere njikọ n’etiti ndị Ijipt ruo mgbe ebighị ebi? Ọ nwere ike ịbụ na anyị kwuru aha ya na onyonyo ya nke ụzọ ya na-acha aja aja, nke aja aja ọla edo na ụlọ arụsị ndị na-ekwu banyere chi ndị ọzọ gbara ya gburugburu. O nwere ike ịbụ, mana taa, anyị ga-abanye miri emi karị ma mụta ntakịrị banyere nke a nnukwu osimiri africa.
1 Osimiri Naịl
2 Naịl na akụkọ ntolite
Ọ bụ osimiri kasị ukwuu n'Africa y gafee mba iri site na kọntinent ahụ ruo mgbe ọ gwụrụ na ndịda ọwụwa anyanwụ Oké Osimiri Mediterenian. Ọ bụ na nnukwu na ọgaranya Delta na Cairo na Alexandria na-agha ụgha. Osimiri Naịl dị kilomita 6.853 ya mere, n'azụ Amazon, ọ bụ osimiri nke abụọ kachasị ogologo n’ụwa.
Site na nyocha dị iche iche Ọdọ Mmiri Victoria bụ ebe mbụ o siri nweta ya, ma ọ dị mkpa ịmara na ọdọ ahụ nwere ọtụtụ osimiri ndị na-asọda n'ibu nke buru ibu. N'ime ha, Osimiri Kagera bụ nke kachasị mkpa. E nwere esemokwu dị n'okwu a, ọ bụ osimiri a ma ọ bụ ọzọ, yabụ mkparịta ụka ahụ ka ga-emeghe.
Eziokwu bụ na n'agbanyeghị na ịmara mmalite ya siri ike, ịgbaso ụzọ ya anaghị esiri ike ozugbo ọ gbanwere. Ọ na-ahapụ Ọdọ Mmiri Victoria na Ripon Falls dị na Uganda wee bụrụ Victoria Nile n’ihe dị ka otu narị kilomita na iri atọ ruo mgbe ọ rutere Ọdọ Mmiri Kyoga. Akụkụ ikpeazụ nke osimiri ahụ, ihe dị ka kilomita 130, na-amalite n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke ọdọ mmiri ahụ, na-asọga n'ebe ọdịda anyanwụ yana, na-eme ka ọ gbanwee buru ibu gaa n'ebe ugwu mgbe e mesịrị iji ruo Karuma dara.
Site na ya ọ gafere Murchison Falls, rute Lake Albert ma mepụta delta. Mgbe ọ hapụsịrị ọdọ ahụ, osimiri na-agafe Uganda, a makwaara ya Naịl Albert. O wee rute na ndịda Sudan, jikọta ya na Osimiri Achwa ma gbanwee aha ya na agba ya ugboro ole na ole n'ihi ụrọ a kwụsịtụrụ na mmiri ya. N'ezie a maara ya dị ka White Nile Maka nke a. N'ihi ya, ọ banyere Sudan wee zute ya Blue Nile.
Site na Sudan mmiri nke osimiri ahụ na-achọ ịmata ihe, ya na mmiri mmiri isii na ụzọ nkewa ruo mgbe ọ banyere n'Ọdọ Mmiri Nasser, nke dịkarịrị n'okpuru ọkọlọtọ Ijipt. Ọ bụ ebe a, n'ofè Aswan dam, na nsọtụ ebe ugwu nke ọdọ mmiri a, ka Osimiri Naịl laghachiri n’ụzọ akụkọ ihe mere eme ya, nke otu mmiri ahụ gbochiri. N'ikpeazụ, ọ dị n'ebe ugwu nke Cairo na e kewara ya na alaka abụọ na-asọba n'Oké Osimiri Mediterenian. Alaka Rosetta dị n’ebe ọdịda anyanwụ ya na ngalaba Damietta, n’ọwụwa anyanwụ, na-etolite Delta Delta.
Na-achịkọta, Osimiri Naịl na-etolite isi ụzọ atọ: Blue Nile, Atbara na White Nile. Aha ahụ n'onwe ya, Nile, sitere na Greek Neilos ma ọ bụ Latin Nius, kwenyere na nwere mgbọrọgwụ Semitic nke pụtara ndagwurugwu ma ọ bụ osimiri ndagwurugwu. Ruo ogologo oge eziokwu ahụ bụ na osimiri ahụ, n'adịghị ka osimiri ndị ọzọ, na-asọ site na ndịda ruo n'ebe ugwu na idei mmiri n'oge oge ọkụ nke afọ bụ ihe omimi ruo ọtụtụ narị afọ, mana nke a bụ kpọmkwem ihe mere ka mmepe obodo ndị ahụ kwe.
Naịl na akụkọ ntolite
N'ịkọwapụta data ndị a banyere Osimiri Naịl, eziokwu bụ na bụ mkpụrụ obi Ijipt, ma ọ dịghị ihe ọzọ site n'Ijipt oge ochie. O kpebiela, duzie ndụ nke ala ndị a kemgbe oge Stone. N’ụzọ doro anya, site na mgbanwe ndị gbanwere ụwa anyị ka oge na-aga.
Maka mmepeanya ndị Ijipt ọ bụ isi. Osimiri ahụ na-agabiga n’akụkụ mmiri ya ugboro abụọ n’afọ ma na-etinye nsị n’ime ya nke mere ka ọ na-amị mkpụrụ. N’ebe a ka ndị Ijipt oge ochie na-akụ ọka wit, papyrus na mkpụrụ ndị ọzọ dị oké mkpa maka mmepe nke ndị mmadụ na-eche ụnwụ nri. Ọzọkwa, osimiri bụ a nkwukọrịta na ọwa ahia ya na ndi ozo, nke meputara ngbanwe aku na uba nke bara uru maka uto ndi mmadu.
E wezụga nri, azụmahịa na nkwukọrịta, osimiri Naịl bụ ihe pụrụ iche n'ụzọ ime mmụọ nye ndị Ijipt. Ekwenyere na Fero na-achịkwa Hapis, idei mmiri ahụ. Ọzọkwa, osimiri ahụ bụ ụzọ dị n'etiti ndụ na ndụ mgbe a nwụsịrị. N'ebe ọwụwa anyanwụ bụ ebe amụrụ na uto ma n'akụkụ ọdịda anyanwụ bụ ọnwụ.
Ili niile dị n’ebe ọdịda anyanwụ Naịl. kalenda oge ochie nke ndị Ijipt dabere na usoro mmiri atọ nke osimiri ahụ, oge nke ọ bụla nwere ọnwa anọ, metụtara ịba ụba nke ala, ịgha mkpụrụ na owuwe ihe ubi.
Kedu anụmanụ na osisi na-ebi na Naịl? Ọ dabere na mpaghara ahụ, mmiri mmiri na oke mmiri ozuzo. Enwere mmiri ozuzo na-ezo n’elu osimiri ahụ na mpaghara ụfọdụ, yana gbakwunyere okpomọkụ na-amịpụta oke ọhịa ụdị osisi dị iche iche nke ebe okpomọkụ na osisi dika unere, osisi ebony, ngwo, ma obu ahihia kọfị. E nwekwara savanna nke nwere ahihia ahihia ma nwekwuo ahihia, nke nwere osisi toro ogologo na ahihia nwere ahihia.
Na Sudan mmiri na-ezo karịa na e nwere ala mmiri tojuru etoju nke mere na ọ bụ ebe papyri, achara toro eto, hyacinth mmiriN'ebe ugwu, mmiri na-ezokarị, mgbe ahụ, ahịhịa dị ụkọ, n'otu ebe n'ọzara amụrụ, ya na ahịhịa nke na-anwụ mgbe mmiri ozuzo gasịrị. N'ihe banyere Ijipt, ahịhịa ndị dị n'akụkụ Osimiri Naịl fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nsonye na ịkọ ihe.
Banyere anụ ọhịa nke Naịl e nwere ọtụtụ azụ dị iche iche ofụri osimiri usoro: perch, catfish, agu azu. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ azụ mmiri ahụ na-akwaga ma mana kemgbe a na-ewu mmiri Aswan, ha apụọ ma ọ bụ belata.
Ọzọkwa enwere agụ iyi, n'ọtụtụ akụkụ Naịl, ọ bụ ezie na ha eruteghị ọdọ mmiri ndị dị n'ebe ugwu nke ọdọ mmiri Naịl. agwọ, ọkara nsi. Hippo? Ozugbo ndị bi na ya bara ụba n’akụkụ osimiri mana taa ọ bụ naanị na ndịda.
Geography, akụkọ ihe mere eme, anụmanụ, osisi. Osimiri ahụ metụtara ihe a niile ma n'aka nke ya, ihe ndị a na-emetụta osimiri ahụ. Mmadu, n’ezie, emeela mgbanwe kachasiri ike nke Osimiri Naịl n’akụkọ ihe mere eme ya: Aswan Dam. Emechara mmiri ahụ na 1970, Ọ dị narị mita abụọ na iri atọ n’ogologo nke nwere ihe ruru mita anọ na olu nke ihe karịrị nde cubic 44. Ọdọ Nasser bụ ọdọ ya nke nwere ijeri cubic mita 169 nke ikike.
Ya ewu chọrọ ebe ọnọdụ ụlọ nsọ oge ochie nke Abu Simbel, na ihe mgbu nke ịnọ n'okpuru mmiri ruo mgbe ebighị ebi. A ghaghịkwa ịkwaga ọtụtụ obodo, ma n'Ijipt ma Sudan. Site na owuwu a, na nke mbụ ya na akụkọ ihe mere eme, ndị Ijipt nwere ike ịchịkwa idei mmiri nke osimiri ahụ ma mee ka mmiri ya dịkwuo elu.
Dị ka ị hụrụ osimiri Naịl bụ akụ dị oké ọnụ ahịa nke Africa. Mgbe ị gara Ijipt, echefula iji njem ndị njem na-agagharị na ya, n'ụgbọ mmiri ọdịnala ma ọ bụ na njem. Lee kpakpando site na Naịl, lee n'ụsọ oké osimiri, ụlọ arụsị, anyanwụ n’ígwé. Chee maka nwa oge, n’ime akụkọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Egypt » Osimiri Naịl